'काठमाडौँभित्र नै एउटा साखाको खातामा अर्को साखाबाट पैसा राख्दा पनि 'दस्तुर' लाग्ने सनराइजको यो कस्तो सेवा ?' - NEPIFY ,
‘काठमाडौँभित्र नै एउटा साखाको खातामा अर्को साखाबाट पैसा राख्दा पनि ‘दस्तुर’ लाग्ने सनराइजको यो कस्तो सेवा ?’
मेरो नाम सुनील अधिकारी हो । मैले सनराइज बैंकको चावहिल साखाबाट फर्पिङको साखामा रकम राख्दा पनि अतिरिक्त पैसा लाग्छ भन्ने सुन्दा तपाईंमध्ये कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो मेरो भोगाई हो । काठमाडौँको एउटा साखामा भएको खातामा अर्को साखाबाट पैसा डिपोजिट गर्दा पनि अतिरिक्त रकम लाग्छ भन्ने सुन्दा पहिला त म तीन छक्क नै परें ।
मैले किन यस्तो हो ? काठमाडौँभित्रको सखामा रहेको खातामा काठमाडौँभित्रकै साखाबाट रकम झिक्दा पनि पैसा लाग्छ र ? भन्ने मेरो प्रश्नमा सनराइज बैंकका कर्मचारीहरुले ‘लोन एकाउन्ट’ बाहेक सबैमा यस्तो चार्ज लाग्ने बताए । मेरो अर्जेन्ट रुपमै पैसा राख्नु पर्ने थियो । मैले त्यहाँ विवाद निकाल्नु भन्दा २०० रुपैयाँ पैसा तिरें र खातामा पैसा पनि हालें ।
मैले सनराइज बैंकमात्र हो कि अरु बैंकमा पनि यस्तो हो भनेर बुझें । बुझ्दा काठमाडौँको हकमा एउटा साखाबाट अर्को साखामा पैसा डिपोजिट गर्दा पैसा लाग्ने रहेनछ । मैले केहि चिनेका बैंकर साथीहरुलाई पनि सोधें । सबैको जवाफ थियो, ‘सनराइज बैंकले चाहिं लिन्छ भन्ने सुनेको । अरुले लिएको थाहा छैन । काठमाडौँको एउटा साखाबाट अर्को साखाको खातामा पैसा हाल्दा त अतिरिक्त पैसा नलाग्नु पर्ने हो भन्ने जवाफ आयो सबैको ।
आखिर जनताको पैसामा किन यस्तो लुट ? सोझा जनतालाई जसरी पनि ठग्नु पर्ने हो बैंकले ? नियम सनराइज बैंकलाई मात्र लाग्ने हो ? नियम हो भने त अरु बैंकले पनि त मान्थे होलान् नि ! होइन र ? किन यस्तो दादागिरी देखाईरहेको छ सनराइज बैंक ? यो विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी अव भएन र ?
तपाईं पनि ख्याल गर्नुहोस् । सनराइज बैंकमा खाता खोल्ने विचार गर्दैहुनुहुन्छ भने वा सनराइज बैंकमा काम गर्नुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् । हामीले आवाज नउठाए कसले उठाउने हो र ? त्यसैले यो आवाज बुलन्द बनाउन बैंकले म र मजस्ता सोझा ग्राहकलाइ ठगेको यो प्रमाण सकेसम्म धेरै ठाउँमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस !
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अस्पलात पुगे , भेटेर यस्तो गरे
Posted on १२ कार्तिक २०७५, सोमबार October 29, 2018 Author NEPIFY
काठमाडौं , नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । सोमबार अपरान्ह शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगी सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन । सामेबार नै नेताहरु जनार्दन शर्मा, मन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष […]
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थमा सुधार ! प्रचारबाजी गर्नेहरु आत्तीए , जनतामा खुसीयाली
Posted on १४ कार्तिक २०७५, बुधबार October 31, 2018 Author NEPIFY
काठमाडौं , केही दिन देखी अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थय अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । चीकीत्सकका अनुसार ओली सामान्य अवस्थामा रहेको बताईएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थमा सुधार आएसंगै उनका शुभेच्छुक तथा जनताहरुमा खुशी छाएको देखीन्छ । तर भ्रमक खबर संप्रेसण गर्ने केही मीडीयाहरु कार्वाहीको दायरामा आएपछी त्यस्तै लेख्ने अन्य अनलाईन मीडीया र […]
चीनका पर्यटनमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नेपालका लागी गरेको यस्तो तयारी खुलासा गरे
Posted on २८ कार्तिक २०७५, बुधबार Author NEPIFY
काठमाडौं , प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लागेको दावी गेरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको चीनका पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री लु सुगाङसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले हिड्न थालेको समृद्धिको बाटोमा मित्र राष्ट्रहरुबाट उदारतापूर्वक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीन सदियौदेखिको सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै […]
‘बिमस्टेक’का लागि ‘मेकअप बिग्रिएको बेहुली’ बन्यो काठमाडौँ, कतै तयारी पूरा, कतै टालटुल अधुरा…! (फोटो कथा)
काठमाडौँको ठमेलको सडकमा माग्न बसेका यी बृद्धले जव ५० हजार रुपैयाँ गन्दै गरेको दृश्य देखियो… ! (फोटोसहित)